History – Page 2 – The Ulwazi Programme
Izinkantolo Zomdabu Namasiko
Kubukeka engathi zonke izinto zomdabu nesintu sethu zihamba zihambe njalo zizithole sezihlanganiso nomthetho wokuphathwa kweze ngohlelo lwezinkantolo. Ngokomlando wesintu, uma kukhona udaba okumele lulungiswe, bekuhlala isigcawu kudingidwe lolodaba. Isigcawu bekuqala ngamalunga omphakathi, ehlakwe izinduna zendawo zona izikhalo ebeziyiswa kuzona. Uma udaba lungaphezulu kwezinduna zendawo bekusiza iphoyisa lenkosi ngokuthi nalo lingene. Uma kwenzeka udaba luhlula lezinhlaka … Read more
Categories Culture, History Tags Amasiko nezinkantolo